Banyere - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nye Nye Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » Banyere
Anyi n’echeputa ihe banyere ire na ire ahia nke na ebunye fm na ngwa aghafe fm. Anyị na-ebugharị ebugharị FM ruo afọ 5. A na-ere ya nke ọma.So m mara ya na ahịa ya. Ọ nwere arụmọrụ dị oke elu na nkwụsi ike dị elu. Anyị nwere ndị ahịa n'ụwa niile, ọ bụghị naanị ndị na-ere ahịa ma ndị na-azụ ahịa.
Ngwaahịa anyị gụnyere: fm nyefee, antennas, powerupplys na PCB na redio na ụdị ngwa mgbakwunye fm.
Site na ahụmịhe afọ 5 na fm transmita, anyị bụ ọkachamara.Ọ raara onwe anyị nye nye ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa asọmpi na nkuzi ahịa dị mma! Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara fm trnamfitter na agbanyeghị ị ga-azụta fm onye na-ebugharị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, biko nweere onwe gị ịkọrọ anyị ajụjụ gị, anyị dị njikere inyere gị aka ma jeere gị ozi!
Yabụ Zụta Ntugharị FM ọ bụla Ruo Mgbe've Hụrụ Fmuser FM Transmitter.
You chọrọ ịrụ ụlọ ọrụ redio gị? Zụta onye na-ebugharị FM anyị, Kọọpịa ya, dị mfe iru Sio redio redio nke gị iji bufee ụda ọ bụla masịrị gị, mgbe ahụ ị nọ ikuku! You machaa onye na-ebugharị FM anyị, ị ga-enwe ọ excitedụ dị ka m! Anyị erewo ihe a kemgbe afọ 5. Erere ya nke ọma. Ya mere amaara m ya na ahịa ya. Nke a bụ ngwaahịa pụrụ iche na nke na-adịghị ahụkebe. Ọtụtụ mmadụ chọrọ ya, mana ha enweghị ike ịchọta ya. N'ihi na ha bụ naanị ọtụtụ ndị mmadụ na-ere ụdị ngwaahịa a n'ụwa. Anyị nwere ndị ahịa na-ebugharị FM n'ụwa niile, ọ bụghị naanị ndị reseller ma ndị na-azụ ahịa. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ chọrọ ya n'ezie. Ha bụkwa ọtụtụ ndị na-amaghị ngwaahịa a. Ha amaghị ihe ọ bụ na ihe ọ nwere ike iji. Ma mgbe ha matachara ngwaahịa a na ọrụ ya, ha ga-enwe ezigbo mmasị na ya ma chọọ inwe otu. Onye ọ bụla hụrụ ngwaahịa m na onye maara ngwaahịa a ga-achọ ịzụta. Enwere m onye ahịa India zụtara onye na-ebugharị FM. Obi dị ya ezigbo ụtọ wee gwa m na otu n’ime nrọ ya bụ ka ọ rụọ obere redio ma ugbu a nrọ ya emezuola!
Nwere ike iji ya ebe ọ bụla n'oge ọ bụla. Entirelọ gị dum, na azụ azụ ..Christmas na-egosipụta ìhè, n'ọrụ ọrụ gị, n'akụkụ ọdọ mmiri gị, ebe a na-agbatị ahụ ike, n'ụgbọala gị, n'elu oche gị ma ọ bụ pation, akụrụngwa mgbazi, n'ụgbọ mmiri gị, mgbe ị na-ezu ike n'ime ụlọ ịsa ahụ ọkụ, mahadum, mgbe ị na-ama ụlọikwuu, n'ime ụlọ ebe a na-adọba ụgbọala gị, ụka dị iche iche, nwere ebe a na-eme ihe ngosi, maka mkpọsa ụlọ akwụkwọ, ndị na-akpa ego & ije-A-thons, ndị na-eme mkpọtụ ụlọ, mgbe ị nọ ezumike, ka ị na-aga ọrụ. were gabazie…
Jukebox nke ekwentị - Nyefee ọdịyo gị na kọmputa ndetu gị ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ MP3 na onye na-anata ụgbọ ala FM ma ọ bụ redio FM ọ bụla.
Redio redio nkeonwe maka nke gị party - Nyefee usoro ọdịyo ọ bụla na kọmputa ụlọ gị, iPod ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ MP3 ọ bụla na redio FM n'ụlọ gị, ị na-ahọrọ ndepụta ndepụta ọkpụkpọ na-enweghị azụmahịa na Akwụ ụgwọ ọnwa.
Onye ọkpụkpọ MP3 / MP4 - Gee ọdịyo ọkpụkpọ MP3 / MP4 gị nke na-anabata redio redio ọ bụla n'ụlọ gị, n'ọfịs ma ọ bụ ụgbọ ala gị.
Ahaziri iche maka ọfịs ma ọ bụ azụmaahịa gị - Nyefee ọdịyo kachasị amasị gị ma ọ bụ ntanetị na ntanetị n'ọfịs gị niile maka gị na ndị ọrụ.
Radi anwụ Satọdeo - Nyefee ọdịyo ọ bụla site na onye na-anabata redio gị na satịkia n’aka ndị niile na - anabata FM n’ime ụlọ gị ma ọ bụ n’ọfịs.
Thelọ ihe nkiri ụlọ - Nyefee ọdịyo ọ bụla na kọmputa gị ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ DVD na ndị niile na - enweta FM nọ n’ogbe niile. (* Enwere ike ịchọ ihe nkwụnye ọkụ USB pụrụ iche ka ijikọ ya na RCA jacks, rere ya iche)
Ikuku PA - Nyefee ụda olu dị elu ma ọ bụ ụda a kara aka nye ndị niile na-anabata FM nọ n’ogbe niile. Zuru okè maka njegharị maka ime ụlọ / n'èzí, nkwalite ụlọ, nkwalite azụmahịa, ọrụ nsụgharị ụka, oke vidiyo, wdg….
Igwe ntanetị - Nyefee redio redio ịntanetị kachasị amasị gị na ntanetị ma ọ bụ ekweisi FM gị.
Azụmaahịa ikwu okwu / ụlọ ahịa - Kwalite ndepụta ụlọ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị nye ndị ahịa nwere ike ịnwere ike. Jiri olu ma ọ bụ ozi ọ bụla edekọworị mgbe ejikọtara ya na igwe okwu egwu ma ọ bụ ọkpụkpọ MP3.
Nyefee egwuregwu site na igwu egwu na egwu egwuregwu - bufee egwuregwu site na egwu nye ndị niile bịaranụ; ndị niile bịaranụ chọrọ naanị nnabata redio redio ọkọlọtọ ka ịnụ ụda ahụ.
Tinye ọtụtụ ngwa ndị ọzọ….
Dakọtara na: iPod, ọkpụkpọ MP3, redio satịlaịtị, CD ọkpụkpọ, PDA, ihe ọkpụkpọ DVD, PC / MAC, kọmpụta Desktop / akwụkwọ ndetu, TV na ndị ọzọ ..
Ọ dị mfe maka ịtọlite ​​.Ama m mara na ọtụtụ mmadụ anaghị achọ ma ọ bụ enweghị ike iwulite FM na-ebugharị, n'ihi na maka ọtụtụ, ọ nwere ike iri nri ọtụtụ oge .Mgbe n'ikpeazụ, ejighị n'aka na ọ ga-arụ ọrụ ozugbo nzukọ. na prodcuts dị mfe. Yabụ ịkwesịrị ịzụta onye na-ebugharị FM, ịchọghị oge iji wuo onye na-ebugharị FM ma ịgaghị eche ma ọ ga-arụ ọrụ ziri ezi. Mbugharị FM dị mfe ịtọlite. o zughi gi oke dika eserese gi. Nke a bụ kit, dị nnọọ pịa ya, ọ dịghị mkpa ịzụta ihe ọ bụla. ọbụlagodi na onye agbata obi anyị dị afọ iri asaa na isii nwere ike iji ya mee ihe dị mfe. Ndị mmadụ nwere ike ịhapụ ịkekọrịta egwu ha na eriri n'otu oghere. Ọ dịkwa mfe iji, dịka mfe dịka jikọọ DVD na TV. Mepụta sio redio gị n'ime nkeji iri!
Jiri ya zuru ụwa ọnụ
You nwere ike iji ntụgharị FM ebe ọ bụla n'ụwa n'ihi ihe nkwụnye ọkụ 110V -220V AC. Ogologo ya bụ 76-108 Mhz, ọ kpuchitere oge mgbasa ozi niile nke redio FM, ọbụlagodi na Japan!
Mfe, Antịtanụ nke A Pụrụ .dabere.
Knowledgechọghị ihe ọmụma elektrọnik ọ bụla maka ịwụnye antenna, kpoo ya ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ihe nrịba ama sterịo
Ọ bụghị naanị na nnyefe nwere oke nnyefe kamfe kamakwa na-agbasa ozi na stere FM.
Ha niile n'otu ngwugwu
Ihe niile ịchọrọ gụnyere na ngwugwu.
Jiri teknụzụ PLL
May nwere ike ịmaghị ihe teknụzụ PLL bụ .N'ihi na ndị na - ebugharị FM enweghị teknụzụ PLL, yabụ mgbama ahụ ga - agbagha mgbe ha na - ebufe. Onye na-ebugharị FM anyị nwere teknụzụ PLL, ọ bụrụ na ị họrọ 99.1 Mhz ka ọ bụrụ ugboro ole gị, PLL ga-edebe gị oge ọ bụla n'agbanyeghị gburugburu ebe obibi.
Okwu:No1502 Ime ụlọ HuiLan No.273 Huanpu Road Guangzhou China Zip:510620